Taageeraha Ugu Weyn Ee Arsenal Peirs Morgan Oo Farriin Hawada U Mariyay Tababare Unai Emery, LABA Xiddig Oo Uu Inuu Iibiyo Ka Dalbaday Iyo HAL Xiddig Oo Uu Saxeexiisa Kula Taliyay – Cadalool.com
Taageeraha Ugu Weyn Ee Arsenal Peirs Morgan Oo Farriin Hawada U Mariyay Tababare Unai Emery, LABA Xiddig Oo Uu Inuu Iibiyo Ka Dalbaday Iyo HAL Xiddig Oo Uu Saxeexiisa Kula Taliyay
January 12, 2019 Mataan
Taageeraha ugu weyn ee kooxda Arsenal ee Peirs Morgan ayaa farriin baraha bulashada u mariyay tababaraha kooxdiisa ee Unai Emery isaga oo farta ugu fiiqay laba xiddig oo ay tahay inuu fasaxo iyo hal mid oo uu bedel usoo iibsado oo uu u tilmaamay.
Xiddiga uu Morgan tababaraha u tilmaamay ayaa ah Philippe Coutinho oo aan ku faraxsanayn kooxdiisa Barcelona isla markaana lala xidhiidhinayo bixitaan kaddib mudo sanad ah markii uu 142 Milyan ugaga biiray dhinaca Liverpool.
Arsenal ayaa haatan lagu soo warramayaa inay ku dhaw dahay saxeexa xiddiga Barca ee Denis Suarez balse fikirka Peirs ayaa ka turjumaya in kooxdiisii hore ay xiddig qadlan ka doonayo kooxda reer Catalonia oo ay ahayd inay dalab ka geeyaan Coutinho.
Taa bedelkeeda, Labada xiddig ee uu taageerahani doonayo in la fasaxo ayaa ah xiddigaha Aaron Ramsey iyo Mesut Ozil oo labaduba u muuqda kuwo haatan taagan irida Emirates Stadium looga baxo.
Qoraalka Peirs Morgan uu iibka Coutinho ku dalbanayo oo ahaa mid uu barta Twiter-ka soo dhigay ayuu ku yidhi “@UnaiEmery Iibi Ozil iyo Ramsey soo iibso Coutinho”
Gunners ayaan wax lacago ah u haysan suuqa bishan January sida uu ka dhawaajiyay tababare Emery marka laga yimaado inay xidigo amaah kusoo qaataan waana qoddob ku qasbi doona inay ciyaartoy iibiyaan haddiiba ay doonayaan saxeexa Coutinho.
Ramsey ayaa ah mid aad ugu dhaw ku biirista kooxda Juventus isaga oo heshiiska uu kooxda ree London kula joogo uu yahay mid gabaabsi ah.
Dhinaca kale, Mesut Ozil ayaa la filayaa inuu iskaga baxo kooxda kaddib markii uu hoos uga dhacay dalabaadka Emery isaga oo kulamadii ugu dambeeyay ee uu kamid yahay kulanka maanta ee West Ham United gabi ahaanba laga saaray safka kooxda.